DF oo booliska MALAYSIA u adeegsatay inay baajiso munaasabada CC Shakuur | Caasimada Online
Home Warar DF oo booliska MALAYSIA u adeegsatay inay baajiso munaasabada CC Shakuur
DF oo booliska MALAYSIA u adeegsatay inay baajiso munaasabada CC Shakuur
Kuala Lumpur (Caasimada Online) – Warqad maanta ka soo baxday booliska magaalada Kuala Lumpur ee dalka Malaysia ayaa lagu sheegay in aysan dalkaas ka dhici karin munaasabad soo dhaweyn loogu sameynayey siyaasiga Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame.
Xogta aan helnay waxay sheegeysa in safiirku booliska uu ku qanciyey inay jiraan dad badan oo u carreysan Cabdiraxmaan Cabdishakuur, oo uu sheegay in khudbad uu hadda ka hor ka jeediyey dalka Jarmalka ay ka dhalatay caro badan, isla markaana ay macquul tahay in dhib ka dhaco goobta.
Dhinaca kale munaasadda soo dhaweynta ah ee Cabdiraxmaan ayaa qabsoontay waxuuna ka jeediyey khudbad uu dhaliilo ugu soo jeediyey madaxda dowladda federaalka, gaar ahaan madaxweyne Farmaajo.
Dhankiisa Cabdiraxmaan Cabdishakuur oo aan xiriirro la sameynay ayaa noo xaqiijiyey in munaasabaddas ay ugu qabsoontay sidii loogu tala galay, isla markaana wax faahfaahina uusan ka helin warka booliska, balse uu maqlay oo kaliya.
Sidoo kale xubno ka tirsan dhalinyaradii ku jirtay qaban qaabada xafladda soo dhaweynta ah ee loo sameynayey Cabdiraxmaan Cabdishakuur ayaa sheegay in xafladdu ay ugu qabsoontay sidii ay ugu tala galeen, balse ay arkeen warqadda booliska, wallow aysan xaqiiji karin sax ahaansheheeda.
Hoggaamiyaha xisbiga Wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame ayaa waayihii dambe waxa uu dalka dibadiisa ka waday socdaal uu ku maray wadamo dhowr ah, kuwaas oo uu kula kulmay dadka Soomaaliyeed eek u nool.